NC Ankai cusub qaataan dadaalka inay soo bandhigto technology shisheeye, oo ku takhasustay soo saarista-dhamaadka sare alaabta mashiinka CNC tag, rigidity sare, xasiloonida wanaagsan.
Shirkadda helay go'an buuxa ee shirkadda Technology South Korea HJM, dunmiiqa jira hal, saddex dhidibka gacanta ku xirid oo ka mid ah saddex CNC lathe toosan adag axdi qarameedka waxyaabaha taxane mashiinka universal, sidoo kale waxay leeyihiin mashiinka adag CNC lathe axdi qarameedka-fasalka sare dunmiiqa double, toddoba xirid dhidibka afar, inta ugu badan si loo daboolo baahida dadka isticmaala kala duwan.
NC qaataan dadaalka in la isticmaalo waxyaabaha: gaar ahaan ku haboon baabuurta, qalabka korontada, isgaarsiinta, warshadaha IT, caafimaadka, duulista, military, hardware, warshadaha qaybo farsamo iyo Haydarooliga ee u tiro badan, sax sare, yar processing qaybo ka adag, wax usha ugu badnaan ku tirtirayaan 38mm dhexroor, gaari karo 24 saac ee wax soo saarka lala joogin.
Mashiinka waxaa uu aqbalayaa nidaamka CNC xawaaraha sare, Advanced dhisay-in dunmiiqa oo la dhisay-in encoder sare xallinta, qaybo khariidad, tayo sare leh iyo (waxyaabaha brand-magaca sida saa'idka, fur kubada, guide toosan yihiin laga keeno) macquul ah, wax soo saarka casri ah, kormeerka warshadda by heerarka sare shisheeye, sidaa darteed waxyaabaha ku gaaraan heerka caalami ee dalka hormartay heerka.
teknoolojiyad sare, Bar bilaw sare, tayo sare leh waa raacdada daa'imiska ah oo Ankai cusub, Ankai dad cusub ruuxa "tayada ugu horeysay, adeeg hufan, ruuxa hormuudka iyo fikirka, si daacad ah oo leh macaamiisha iyo horumarka caadiga ah.
CNC sifooyinka alaabta mashiinka: